आजसम्म २३३६ नमुना परीक्षण, शनिबारयता देखिएको छैन कोराना संक्रमण | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
access_time२०७६ साल चैत्र २६ गते, बुधबार ०४:२९ PM chat_bubble_outline Comments folder_open स्वास्थ्य​ मुख्य खबर​ भिडियो
काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणका शंकामा स्वाबको नमुना संकलन गरिएका ५७० जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिएको छ ।
बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले स्वाबको परीक्षणमा कसैमा पनि कोरोना संक्रमण नदेखिएको जानकारी दिए । यसअघि शुक्रबार राति तीनजनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । त्यसयता कोरोनाको संक्रमण देखिएको छैन ।
मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म २ हजार ३६६ वटा परीक्षण भएका छन् । त्यसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार ९६५ र उपत्यकाबाहिर ४०१ जनामा परीक्षण गरिएको छ । मंगलबारसम्म १ हजार ७९६ जनाको परीक्षण गरिएको थियो ।
नेपालमा अहिलेसम्म नौजनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएकोमा एकजना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । बाँकी आठजना उपचाररत रहेका छन् । उपचाररत रहेका परिवार तथा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रवक्ता देवकोटाले सरकारले परीक्षणको दायरा बढाएको बताए । कैलाली र कञ्चनपुरबाट मात्रै १९८ जनाको र्यापिड किट र स्वाबको नमुना संकलन गरिएको छ । अछाम, जुम्ला र सुर्खेतलगायतका जिल्लाबाट ८०२ वटा नमुना संकलन गरिएको प्रवक्ता डा. देवकोटाले जानकारी दिए । दिपायलमा बुधबार ३०० भन्दा बढी नमुना संकलन गर्ने उद्देश्यका साथ टोली परिचालन गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा १२ र उपत्यकाबाहिर १२२ गरी बुधबारसम्म १३४ जना आइसोलेसनमा रहेका छन् । ८ हजार ५८० जना क्वारेन्टाइन्मा रहेका छन् ।